China Okirikiri Vibrating Screen rụpụta na Factory | Xinrui
Ihu igwe na-emegharị anya bụ ihe eji emegharị vibrator mepụtara site na ntụgharị na ọrụ. Igwe dị elu nke rotary nke vibrator na-eme ka ihu igwe wepụta ihu igwe cyclotron, ebe ịdị arọ nke obere na-eme ka ihuenyo ahụ na-emepụta ihu igwe na-agagharị agagharị, na njikọta jikọtara na-eme ka ihu ihuenyo wepụta vibration. Zọ ntụgharị ya bụ usoro oghere dị mgbagwoju anya.
Ihu igwe na-emegharị anya bụ ihe eji emegharị vibrator mepụtara site na ntụgharị na ọrụ. Igwe dị elu nke rotary nke vibrator na-eme ka ihu igwe wepụta ihu igwe cyclotron, ebe ịdị arọ nke obere na-eme ka ihuenyo ahụ na-emepụta ihu igwe na-agagharị agagharị, na njikọta jikọtara na-eme ka ihu ihuenyo wepụta vibration. Zọ ntụgharị ya bụ usoro oghere dị mgbagwoju anya. A na-atụgharị akụkụ ahụ ka ọ bụrụ okirikiri n’elu ụgbọelu kwụ ọtọ yana ellipse n’elu ụgbọelu kwụ ọtọ. The njupụta nwere ike gbanwee site n'ịgbanwe excitation ike nke elu na ala n'usoro n'ibu arọ hama. Site na imeghari uzo uzo Angle nke elu na ala hama, enwere ike igbanwe udiri ihe ngosiputa ngagharị nke ihu ihuenyo na ntughari uzo nke ihe di n’elu ihu.
Okirikiri ikuku dị gburugburu bụ ụdị nnukwu ihuenyo na-ebugharị, nke a na-ejikarị eme ihe maka nyocha coal, limestone, gravel, metal ma ọ bụ non-metal ore na ihe ndị ọzọ, nke metụtara nchekwa nke ndị ọrụ. Enweghị ihe ọ bụla dị mkpa banyere nchekwa ahụ, nke chọrọ usoro mmepụta nke ihuenyo okirikiri okirikiri ka emezie ma kwadobe ya, ogo ngwaahịa ga-etozu ma zute iwu obodo, yana ihu igwe na -emegharị arụ ọrụ Anyị kwesịrị ileba anya ma enwere mgbanwe na-adịghị mma na igwe ihuenyo site na ịnụ na ọhụụ, dị ka ma enwere ụda olu, ma ihe ahụ na-agbagọ, ma ihuenyo ahụ adịghị agbachi ma gbochie, ma ọnọdụ ọrụ nke ịma jijiji na igbe ihuenyo bụ ihe dị iche, ma lelee amị okpomọkụ n'otu oge.
Igwe okirikiri dị gburugburu bụ ụdị akụrụngwa nyocha dị elu, obere mkpọtụ ya, arụmọrụ dị elu, naanị 3-5 nkeji iji dochie ihuenyo ahụ, mechiri emechi kpamkpam. Adabara echetakwa plastic ntụ ntụ ihe onwunwe filtration.
Ngọngọ sieve na vetikal moto dị ka vibration isi, na nsọtụ abụọ nke moto arụnyere eccentric arọ na moto adiana n'ime kehoraizin, vetikal, mmasị atọ akụkụ ije, na mgbe ahụ zigara elu nke ihuenyo. Gbanwee akụkụ nke elu na nke ala iji gbanwee trajectory nke ihu ihuenyo.
Uru nke ihuenyo okirikiri
Ihuenyo ihuenyo okirikiri bụ ụdị ọhụụ ọhụụ na -eme ka ihu igwe nwee ọtụtụ ngebichi na arụmọrụ dị elu;
Low nchegbu ujo absorption mmiri na-eji belata mkpọtụ;
Ọ adopts ibu arọ amị na nnukwu mmanụ ọdịiche, ala na-arụ ọrụ okpomọkụ na ogologo ọrụ ndụ;
A na-ewere usoro nke igbe ihuenyo na etiti nwere oke ike;
Ikike na-eguzogide ọgwụ roba nwere ike nyere iji mee ka ihe rapaara na ihuenyo oghere na-awụlikwa elu na-egbochi ndị ihuenyo onu si igbochi;
Ọ nwere uru nke nnukwu nhazi ikike, eluigwe na ala siri ike nke akụkụ na-adaba adaba.
Nke gara aga: PVC Knife efere nke pulverizer
Osote: Ngwongwo Ngwunye Magnetik siri ike